IiColognes zamadoda: eyona ilungileyo kusapho ngalunye olfactory | Amadoda aQinisekileyo
UMiguel Serrano | | Ukunyamekela, Iifumba
Zeziphi ezona zilungileyo zokuthambisa zamadoda? Oko kuxhomekeke kwinto oyijongileyo kuye: ubutsha, ubuqili, ubudoda, isibindi ...
Sifumana iikholoni ezinkulu kusapho ngalunye lwe-olfactory (ezintsha, iintyatyambo, iinkuni kunye ne-oriental). Ezi zilandelayo i-colognes ziqala ukusuka ekukhanyeni ziye kubunzima, kodwa ngokuqinisekileyo ziya kukunceda wenze umbono wokuqala..
1 Eau de yangasese okanye cologne?
2 Iikoloni ezintsha
3 Iikoloni zeentyatyambo
4 Iikholoni ezinemithi
5 Iikholoni zaseMpuma
Eau de yangasese okanye cologne?
Sebenzisa igama elithi "cologne" endaweni yegama elithi "eau de toilette" kulunge ngakumbi kwizithethi ezingezizo ezesiFrentshi. Nangona kunjalo, uninzi lwee-colognes zamadoda ziyinyani (kwaye oku kubonisiwe kwibhotile).
Yintoni i-eau de yangasese? Amafutha ahlelwa ngokokuxinana kweoyile, kwaye eye-deu yangasese iphakathi kwe-5 kunye ne-15%. Oko kuthetha ukuba ihlala malunga neeyure ezi-3, engathathelwa ingqalelo kakhulu okanye incinci kakhulu.
Ngale nto ithethwayo, ungakhathazeki njengo Akulunganga ukusebenzisa igama "cologne" ukubhekisa kwi "eau de toilette". Ungaqhubeka uyenze ngaphandle kwengxaki, njengoko okwangoku ilixesha elinokusetyenziselwa onke amakha amadoda.
Iikholoni zolu sapho lwe-olfactory zilungele usuku, ngakumbi ngexesha lentwasahlobo nehlobo. Yapapashwa ngo-2010 yaza yaziswa ngebhotile emnyama ilula njengoko inomdla, I-Acqua di Parma Essenza di Colonia ngokungathandabuzekiyo iphakathi kwezona zilungileyo zeklasi.
Ukuqhubeka ne iithanga zesitrasiOku kulandelayo kufanelekile ukuba sikhankanye:
UPaco nguPaco Rabanne
UCalvin klein ck omnye
Mnumzana de Givenchy
4711 yoqobo uEau de Cologne
Ngaba ukhetha ukutsha kwaselwandle? Kwimeko apho, ii-colognes zamadoda zilandelayo ziya kuba njengokuthanda kwakho:
Loewe Amanzi Yena
Amanzi apholileyo kaDavidoff
Acqua di Giò nguGiorgio Armani
Hugo Element usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
CH Amadoda ezemidlalo
Kwaye sifika kusapho lweentyatyambo olfactory, olusebenza kakuhle kakhulu emini, ngakumbi ngexesha lasehlotyeni. Ukuba igama elithi iintyatyambo alikwenzi ungathembi, kuba oko akubathinteli ekubeni ngamadoda kakhulu..
Ukuba ujonga i-cologne eneentyatyambo zombini eyindoda, ULanvin L'Homme Ngaphandle kwamathandabuzo enye yezo kufuneka uzame kwixesha elizayo xa uhamba kwicandelo leziqholo. Imfihlo ngamanqaku ayo. Kwenzeka into efanayo ngeLoewe 7, eyokugqibela ibulungele ngakumbi ubusuku.
Enye ikoloni eyimpumelelo kakhulu yale ntsapho ye-olfactory is Eau de Rochas Homme. Njengoko isebenza kakuhle emini nasebusuku, lukhetho lokujonga ukuba ungomnye wabo bakhetha ukungangxami kwaye usebenzise i-cologne efanayo ngalo lonke ixesha.
Apha ngezantsi kwale migca ungabona ezinye iintlobo ezinkulu zeentyatyambo:
UCalvin Klein CK Yiba
Paul Smith Amadoda
Acqua di Selva nguVisconti Di Modrone
Ukubonelelwa ngee-colognes zamadoda kugcwele kunye nezo zeentsapho ezinobunzima be-olfactory. Akumangalisi ke oko ziqhumiso zobudoda kakhulu. Ngale ndlela, babhejo olukhuselekileyo kwi-arsenal yakho yeenkoloni, kunye naxa kuziwa nika umntu isipho.
Ukuba uyazibuza ukuba yeyiphi i-cologne oza kuyisebenzisa emva koqeqesho ukuze uzive uhlaziyekile kwaye uvuselelwe, iYves Saint Laurent L'Homme Sport yenye yezona ndlela zibalaseleyo kwintengiso. Thatha kunye nayo kwingxowa yakho yokuzivocavoca kwaye uthathe ithuba lokutsha kwayo, ivumba elimnandi emva kweshawa yakho yasemva kokuzilolonga.
Oku kulandelayo zezinye iicolognes zamadoda anezinto ezifanelekileyo ukujonga usuku:
IVetiver nguAdolfo Domínguez
Inombolo yeBhosi yokuqala
I-Loewe 7 yendalo
I-Bvlgari BLV ithulule iHomme
Ichic yamadoda nguCarolina Herrera
Amadoda eDKNY nguDonna Karan
UPaco Rabanne Invictus
Idizili kuphela iTattoo Ekhaliphileyo sisiqholo esineziqholo somthi esisebenza ebusuku kakhulu. U-Esencia uthela u-Homme ngu-Loewe, u-1 Million ngethamsanqa ngu-Paco Rabanne, u-Narciso Rodríguez Bleu Noir waKhe Eau de parfum okanye oboniswe ngobuhle, uGucci ngu-Gucci, naye uyabonakala xa kufikwa kwi-colognes enomthi efanelekileyo ebusuku.
Iziqholo ezinokuthinta okungaqhelekanga zilungile ukuba zingabonakali ebusuku. Oku kulandelayo kukhetho oluhle kakhulu:
Ukuqwalaselwa kukaCalvin Klein kwaMadoda
UCarolina Herrera 212 Amadoda aMdaka
CH Amadoda nguCarolina Herrera
Hugo Boss Umnyama oBlue
Yves Saint Laurent Kouros Umzimba
IBurberry Brit yaMadoda
Kwaye kunjalo Le Male nguJean Paul Gaultier, kunye nebhotile yayo yakudala emile okomntu oomatiloshe.
Ngaphandle kokuqina kwabo, ii-colognes ezivela kusapho olfactory lwasempuma nazo zinokusebenza kakuhle emini. Uhlobo lwaseMpuma lweentyatyambo, i-Solo Loewe cologne kukubheja okuqinileyo kakhulu kosuku. Ukuba uyaluthanda olu hlobo lwevumba elimnandi, unokuzama oku kulandelayo:
Ukuya eCeylan nguAdolfo Domínguez
UCalvin Klein CK Umothuko omnye
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Iifumba » Cologne yamadoda